Farmaajo oo diiday qodob ay B/Caalamka rabto in lagu xaliyo muranka doorashada - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo diiday qodob ay B/Caalamka rabto in lagu xaliyo muranka doorashada
Farmaajo oo diiday qodob ay B/Caalamka rabto in lagu xaliyo muranka doorashada
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo warramayaa inuu diiday qodob ay soo jeedisay beesha caalamka oo la rabo in lagu xalliyo muranka ka taagan doorashada.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa wada hawlo uu ku dar-dar galinayo arrimaha doorashooyinka, wuxuuna ku baaqay iney shir isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isla markaana la dhameeyo khilaafyada jira ee doorashada ku hareereysan.
Caasimada Online ayaa ogaatay in madaxweyne Farmaajo uu ka biyo diidsan yahay in shir la isugu yimaado, sidoo kalana waxaa xusid mudan iney socon waayeen waan-waan uu waday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Farmaajo iyo maamullada taageersan waxey doonayaan iney doorashada ku dhaqaaqaan ka hor dhamaadka xil-heyntiisa, inkastoo laga digay inuu qabto doorasho qabyo ah taasoo laga cabsanayo iney ka dhalato xasillooni darro.
Lama oga hadii madaxweyne Farmaajo uu ogolaan doono shirka ay soo jeedisay beesha caalamka iyo inuu ku dhaqaaqi doono doorasho qabyo ah oo laga sii digay cawaaqib xumada ka dhalan karta.